हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ५ बन्तरीयाकी बिष्ना रानाले एकैचोटी ३ सय ९६ किलो प्याज बेचिन् । उनले उत्पादन गरेको प्याज रामनगर तरकारी संकलन केन्द्रको समन्वय र एन्.एन्.एस्.डब्ल्यु.ए. को सहयोगमा कैलालीको अत्तरिया स्थित तरकारी संकलन तथा बिक्रि केन्द्रले लगेको हो । १९ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकिलोका दरले उनले जम्मा रु. ७ हजार ७ सय बाइस रुपैयाँ कमाइन् । एकमुष्ट हातमा रुपैयाँ परेपछि खुसी हुनु त स्वभाविक हो तर आफैले उत्पादन गरेको प्याज लैजान घरमै ट्रक आएर नगद रकम समेत दिएर लगेकोमा उनको खुसी बढी थियो । विगतका वर्षमा आफैँले विउविजनको खोजिगरी थोरै प्याज खेती गरेपनि बजारीकरणमा समस्या हुने र बिक्रि हुन नसकेको प्याज कुहिएर जाने गरेको भएपनि हाल आएर गैरसरकारी संस्था एन्.एन्.एस्.डब्ल्यु.ए. को सहयोगमा प्याज लगायतका तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी भइरहेको उनले सुनाइन् ।
बन्तरियाकी बिष्ना जस्तै त्यस क्षेत्रका दर्जनौँ घरपरिवारका महिलाहरुले मिलेर १५ बिघा जमिनमा प्याज खेती गरेको महिला कृषक मिना चौधरीको भनाइ छ । गतवर्ष एक कट्टा जमिनमा ५ क्विन्टल जति प्याज उत्पादन भएपछि बन्तरिया र अनामनगरमा महिलाहरु प्याज खेतितर्फ आकर्षित भएका हुन् । गैरसरकारी संस्था एन्.एन्.एस्.डब्ल्यु.ए. ले उन्नत जातको विउविजन देखि अन्य प्राविधिक सहयोग गरेपछि ठूलो क्षेत्रमा प्याज खेती गर्न सुरु गरिएको मिना चौधरीले बताइन् । घरपरिवारलाई वर्षभरी पुग्ने गरी राख्ने गरेको र थप उत्पादित प्याजलाई सानो, मध्यम र ठूलो गरी छुट्याइ बिक्रि वितरण गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । सृजना विपद् व्यवस्थापन समितिमा आबद्द भइसकेपछि प्याजको बेर्ना, च्याउँ र अन्य तरकारीबाली उत्पादन गरी आम्दानी गर्ने गरेको र समूह भित्र खर्च व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताएकी छन् ।
त्यहाँका कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारीलाई रामनगर तरकारी संकलन केन्द्रमा संकलन गर्ने गरिएको छ । प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले तरकारी संकलन गरी स्थानीय र बाहिरका व्यापारीहरुलाई बिक्रि गर्ने गरेको रामनगर तरकारी संकलन केन्द्रका अध्यक्ष साइतुलाल चौधरीले बताए । गैरसरकारी संस्था एन्.एन्.एस्.डब्ल्यु.ए. को सहयोग र स्थानीयहरुको जनश्रमदानमा तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तरकारी संकलन केन्द्रले आसपासका कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी मात्र होइन नजिकै रहेको लालझाडी गाउँपालिकाका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी समेत संकलन गर्ने गरेको उनले बताए ।
अझैपनि धेरै स्थानीय कृषकहरुले बजारीकरणको समस्या भएको भन्दै व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्न मन लगाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई समेत प्रोत्साहित गरी कृषकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिकता तर्फ केन्द्रित गर्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्ने बेला भएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, जेठ १९, २०७६, १२:०६:००